Waqtigii loo qabtay magacaabista guddigii farsamo ee doorashooyinka qaranka oo maanta ku eg… | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Waqtigii loo qabtay magacaabista guddigii farsamo ee doorashooyinka qaranka oo maanta ku...
Waqtigii loo qabtay magacaabista guddigii farsamo ee doorashooyinka qaranka oo maanta ku eg…
Bilawgii bishaan waxaa la jadwaleeyay habraaca doorashada 20/21 oo fure u ah dhismaha Guddiga farsamo & xalinta khilaafaadka oo min labo xubnood laga sugayo Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada.
Go’aankaas ayaa u muuqda ku dhaqaaqistiisa in uusan kasoo gudbin oo uu soo dhaafin miiskii wada-xaajoodka, maadaama 20-cishe oo laga joogo waqtigii la saxiixay & tobankii u gaarka ahaa laga soo gudbay, isla markaana aysan jirin howl muuqata oo dhankaas ka socota.
Madaxda heshiiska gashay kama aysan hadlin waxyaabaha hortaagan in ay ku dhawaaqaan labo xubnood ee Dowlad Goboleed waliba laga doonayo, dhammaan afka ayay ka xirteen sida in ay isku ogyihiin oo kale.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo 17-kii bishaan Oktoober soo saaray warqad uu ku dalbanayo in lasoo dadajiyo magacaabista guddiga farsamada & xalinta khilaafaadka ayaan jawaab ka helin Maamul Goboleedyada codsigii uu u diray.
Warqadaan Rw Rooble uu soo saare sida idinkaga muuqata waxaa laga reebay DG Koofur Galbeed & Gobolka Banaadir oo qayb ku lahaa saxiixa heshiiska laga gaaray Doorashada, walow Koonfur Galbeed warbixin hore oo aan ka qorne haddii aan nahay bahda Xorriya.com aan idin kugu sheegne in ay ahaayeen maamulkii ugu horeeye ee soo gudbiya liiska xubnahaas.
Inkastoo arinka Gobolka Banaadir aanan aqbaar rasmi ah weli ka helin ujeedka looga reebay & haddii xubnahooda ay diyaarsadeen, madaama aan weyne cid faahfaahin rasmi ah nagasiisa arinkaan, walow aan isku dayo badan oo la xiriira ogaanshaha sababta looga reebay ay ka gaabsadeyn maamulka Gobolka.
Howsha magacaabista guddiga farsamo ayaa astaan u ah dhaqangalka Jadwalka Doorashada Soomaaliya, ujeedka ayaa ah in xubnahaan inta ka dhiman bishaan iska dhex doortaan guddoonkooda & sida ay howsha u wadayaan.
Haddaba, Suuragal ma tahay in Saacadaha ka dhiman muddo ballameedka lagu magacaabayo Guddiga farsamo & xalinta Khilaafaadka malagu soo magacaabi karaa?